Jibriil Ibraahim Cabdulle oo maanta si rasmi ah ugu dhawaaqay inuu yahay Musharrax Madaxweyne – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Jibriil Ibraahim Cabdulle ayaa maanta si rasmi ah ugu dhawaaqay inuu yahay Musharrax u taagan xilka Madaxweynaha Soomaaliya, kaddib munaasabad ballaaran oo maanta ka dhacday Hotelka City Palace ee magaalada Muqdisho.
Munaasabadan oo aheyd tii u horeysay ee nooceeda ayaa waxaa ka soo qeyb galay kumanaan ruux oo isugu jiray qeybaha kala duwan ee bulshada, iyadoo doorka ugu muuqda ka qaadanayeen Dhalinyarada, waxaana Munaasabada lagu soo bandhigay hal ku dhiga Hal Qaran
Hoolka Hotelka oo aad u buux dhaafay ayaa barxada la dhigto baabuurta oo la suray teendhooyin ayay dadka u suura geliyay inay in hoolka galaan waxay shaashad weyn kala socdeen khudbada uu jeedinayay Musharraxa Dhalinyarada ah Jibriil Ibraahim Cabdulle.
Dadkii kala duwanaa ee Munaasabada ka hadlay ayaa muujiyay howl karnimada Jibriil iyo waaya aragnimadiisa, iyagoo sheegay in 20-kii sano ee la soo dhaafay uu dalka ku sugnaa, isla markaana xog ogaal u yahay xaaladihii kala duwanaa ee uu dalku soo maray.
Munaasabadda ayaa waxaa lagu soo bandhigay suugaan kala duwan oo ka hadlayay sida dalka ugu baahan yahay halyey daacad ah oo dadka Soomaaliyeed ku dhaqa caddaalad iyo jiritaan dhab ah.
Jibriil Ibraahim Cabdulle oo gaba gabadii khudbad ka jeediyay Munaasabada ayaa caddeeyay inuu yahay Musharax u taagan xilka Madaxweynaha Soomaaliya, isagoo ugu mahad celiyay dadka kumanaanka ah ee ka soo qeyb galay munaasabada, waxaana uu ka raalli geliyay duruufaha ka jira magaalada.
“Soomaaliya waxay galeysaa xaalad kala guur ah oo qiimeyn gaar ah leh, taariikh culus baa soo marnay, 1960 halkii ay joogtay ayay maanta oo ah 2016 Soomaaliya joogtaa, in ka badan 20-sano ayuu dalka dowlad la’aan ahaa iyo bur bur ku yimid qaranka, afarta sano ee soo socota waxay ka qiimo badan tahay 50-kii sano ee Soomaaliya soo maray, sababta waxay tahay xilligan lagu jiro haddii afarta sano ee soo socoto Khasaaro noqoto sida afartii sano ee la soo dhaafay, waxaa shaki ku jirin in dadka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan in la galayo dib u dhac”ayuu yiri Musharrax Jibriil Ibraahim Cabdulle.
Mr Jibriil ayaa sheegay in afarta sano ee soo socota looga bixi karo caqli saliim ah, dareen dadnimo, isagoo xusay in xilligan lagu jiro ay shacabka Soomaaliyeed ay u jajaban yihiin dowladnimada, isla markaana uu ka muuqdo biseyl badan, maadaama horay dhibaato fara badan loo soo maray.
Musharrax Jibriil Ibraahim Cabdulle ayaa sheegay inuu aqbalay codsiga uga yimid Dhalinyarada Soomaaliyeed oo ah ah talo ay u soo jeediyeen inuu is sharraxo, waxaana uu xusay in todobaadyada soo socda shirar ka dhici doona magaalooyinka dalka iyo deegaanada uu tagi doono ku soo bandhigayo qorshaha uu damacsan yahay in afarta sano ee soo socota uu dalka ku hoggaamiyo.
“20 sano ayaa dalkaan dhex taagnaa maanta waxay ii muujiyeen dareenkooda, waxaa ku faraxsanahay sida ay i soo dhoweeyeen oo ay codsigooda igu soo gudbiyeen, anigana waa ka aqbalay, waxaa idin cadeynayaa inaan maanta ahay Musharraxa Madaxweynaha Soomaaliya ee doorashada sanadkan 2016″ayuu yiri Mr Jibriil Ibraahim Cabdulle.
Waxaa uu sheegay in 20-kii sano ee uu dalka ka waday howlaha nabadeynta iyo xalinta khilaafaadka aanu xataa noqon Agaasime dowladeed, waxaa uu xusay in Soomaaliya horumar badan sameysay, isagoo xusay inuu u soo joogay xilli garoonka diyaaradaha Muqdisho xirnaa, dadkana ay meel ka baxsan magaalada oo saacado loo sii soconayo diyaarad laga raaci jiray.
“Wadanka is bedel ayuu u baahan yahay, cadaalad ayuu u baahan yahay is bedelka soo socda kama harin bilo ee maalmo qura ayaa ka haray”ayuu hadalkiisa ku soo gaba gabeeyay Musharrax Jibriil Ibraahim Cabdulle.
Jibriil Ibraahim Cabdulle ayaa lagu tirinayaa inuu yahay Musharraxiinta ugu miisaanka culus, iyadoo dhoolatuskiisa u horeeyay ee ololihiisa doorashada uu durbaba noqday mid taariikh sameeya, marka loo eego kumanaanka ruux ee ka soo qeyb galay xaflada, safaf dhaa-dheerna ugu jiray goob-joognimada.